प्रवास | BikalpaNews.com- the most popular online magazine of Nepal | Page 3
भारतमा ५७ लाख नाघे कोरोना संक्रमित
८ असोज, काठमाडौं । भारतमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)बाट संक्रमित हुनेको संख्या ५७ लाख नाघेको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५७ लाख ३२ हजार ५१९ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र भारतमा ८६ हजार ५०८ नयाँ संक्रमित थपिएका हुन् । त्यस्तै भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि ९१ हजार १४९ […]
असोज ५ गते । काठमाडौं। रुसी क्रान्तिका सबैभन्दा ठूलो नायक भ्लादमिर लेनिनको अगुवाइमा रुसमा जार शासनको अन्त्य भएको थियो । उनकै नेतृत्वमा रुसी क्रान्तिपछि सन् १९२२ मा सोभियत संघको स्थापना भयो र विश्व महाशक्ति बन्यो । सन् १९२४ मा लेनिनको मृत्यु भयो । तर लेनिनको मृत्यु भएको ९६ वर्ष भैसक्दा पनि उनको शव अहिलेसम्म सुरक्षित रुपमा […]
पोर्चुगलमा ६१० किलोको फर्सी फल्दा नेपाली कामदारलाई……..
विकल्प न्यूज/बेनी असोज ५ गते । पोर्चुगलको दक्षिणी भेकका किसान जोसे सान्तोषले ६ सय १० किलोको फर्सी फलाए । त्यसले नेपाली कामदारलाई तनाव भएको छ । संसारैभरीको फर्सी प्रतियोगितामा भाग लिने गरी सान्तोषले फर्सीको रेखदेख गरेका छन् । तौल बढ्न अझ केही समय बाँकी छ । तीन महिनासम्मको आयू भएको यो फर्सी ७ सय किलो […]
२०७७ असोज ४;नयाँ दिल्ली। आइतबारभारतमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ५४ लाख ६ सय २० पुगेको छ । संक्रमितमध्ये ४३ लाख तीन हजार ४४ जना निको भइसकेका छन् । अहिले सक्रिय संक्रमित भने १० लाख १० हजार आठ सय २४ जना भएको भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा ९२ हजार […]
विकल्प न्यूज/बेनी असोज ३ गते । बेनी नगरपालिका–४, सिंगाका डा. जिवन बानियाँको पहलमा म्याग्दीका बाढीपहिरोबाट विस्थापितलाइ लक्षित गरी करिब साढे दुई लाख बराबरको सहयोग ओमकुमारी शान्ति कोषमा हस्तान्तरण भएको छ । गएको असार महिनाको २५ गते म्याग्दीको विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरोबाट विस्थापितलाई राहत तथा पुर्नवास अभियानमा सघाउन हाल काठमाण्डौमा रहनुभएका डा. बानियाँको पहलमा संकलन भएको आर्थिक […]
भारतमा एकैदिन थपिए ९७ हजारभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित
१ असोज, काठमाडौं । भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का ९७ हजार ८९४ नयाँ संक्रमित थपिएका हुन् । भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यससँगै भारतमा करोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ५१ लाख १८ हजार २५४ पुगेको छ । त्यस्तै भारतमा कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु हुनेको संख्या ८३ हजार १९८ पुगेको छ । […]
असोज १, २०७७ काठमाडौं भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ३ सय ८२ जना डाक्टरको मृत्यु भएको छ। इन्डियन मेडिकल एसोसियसनले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार ठूलो संख्यामा अन्य स्वास्थ्यकर्मीले पनि कोरोना महामारीमा ज्यान गुमाएका छन्। संघले कोरोना महामारीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित डाक्टरहरु भएको र सरकारले यसमा कत्ति पनि ध्यान नदिएको भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसका […]
भारतमा कोरोनाले ७२ हजार ७७५ जनाको ज्यान लियो
विकल्प न्यूज/बेनी भदौं २४ गते । भारतमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ७२ हजार ७७५ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा १ हजार १३३ संक्रमितको ज्यान गएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकमा उल्लेख छ । भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा ७५ हजार ८०९ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । भारतमा हिजो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै एकै दिन ९० […]
मृगौला पीडित गबुर्जालाई पोर्चुगलबाट २४ हजार सहयोग
विकल्प न्यूज/बेनी साउन २२ गते । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका ४ दग्नामका मृगौला पीडित अमृत गर्बुजालाई २४ हजार रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ । विगत केही वर्ष देखि मृगौलाको रोगबाट ग्रस्त भएका गबुर्जाको उपचारमा सघाउन पोर्चुगलमा रहनुभएका यामलाल पौडेलको पहलमा उक्त रकम संकलन भएको हो । पौडेललेको नेतृत्वमा संकलन भएको रकम विहिवार ओमकुमारी शान्तिकोषको समन्वयमा पीडितको […]
जापानबाट म्याग्दीले विद्यार्थीहरूले पठाए पहिराे पीडितलाई सहयाेग
विकल्प न्युज/ बेनी साउन ७ गते । जापान पढ्न गएका म्याग्देेेेलि विद्यार्थीहरूले पहिराे पीडितहरूलाई सहयाेग पठाएका छन । गत असार २५ गते धौलागिरि गाउँपालिकाकाे ६ मराङ, ७ ताकम र मालिका गाउँपालिका ७ बिममा गएकाे पहिराेका पीडितहरूकाे सहयाेगका लागि दुईलाख २६ हजार ५ सय ६३ रूपैया पठाएका हुन । बुधवार म्याग्देलि विद्यार्थी का प्रतिनिधि विनाेद केसिले […]
विकल्प न्यूज/बेनी साउन १ गते । म्याग्दीका वाढीपहिरो पीडितहरुलाई मोना बेल्जियमले दुइलाख भन्दा वढी सहयोग गरेको छ । विहिवार ओमकुमारी शान्तिकोषको सचिवालय बेनीमा आयोजित सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा मोना आइसिसीका उपाध्यक्ष सूर्य भट्चनले शन्तिकोषका अध्यक्ष राजेश शाक्यलाई दुइलाख ११ हजार दुइसय ७२ रुपियाँ हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । पहिरो पीडितहरुको सहयोगका लागि शान्तिकोषले सहयोग अभिायन संचालन गरेको […]
३ असार, काठमाडौं । भारत र चीनको विवादित सीमा क्षेत्र लद्दाखको गलवान क्षेत्रमा दुवै देशका सैनिकबीच भिडन्त हुँदा २० जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको छ । १५ र १६ जुनमा भएको भिडन्तमा भारतीय सेनाका एक अधिकारी र १९ जवानको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ । भारतीय सेनाले मंगलबार राति अबेर यो जानकारी दिएको हो । […]
विकल्प न्युज/ लण्डन बैैैैैशाख २३ गते । बेलायतमा कोरोनाबाट सोमबार समाजसेवी नारायण कोन्मे गुरूङको मृत्यु भएको छ। उनलाई गत हप्तादेखि रुघाखोकी लागेर ननिटनको जर्ज इलियट अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। केही दिनदेखि सघन उपचारकक्षमा राखी उपचार भइरहेका गुरुङको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको गोरखा प्यालेस रेष्टुरेन्टका सञ्चालक एवं समाजसेवी सूर्य गुरुङले जानकारी दिए। पर्वत चारभञ्याङमा जन्मनुभएका गुरुङ […]
विकल्प / बेनी बैशाख २१ गते । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ संक्रमणका कारण शनिबार साँझसम्म मृत्यु हुने गैरआवासीय नेपालीको संख्या ७३ पुगेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), स्वास्थ्य समितिले संकलन गरेको तथ्यांकानुसार बेलायतको ग्रेटर लण्डनमा २७, मिडल्याण्डमा आठ, साउथ इष्टमा ११ र साउथ बेष्टमा ती गरी ४९ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै […]
कोरोना संक्रमणबाट म्याग्दीकी लक्ष्मी भट्टचनको नेदरल्याण्डमा निधन
विकल्प न्यूज/बेनी बैशाख ७ गते । कोरोनाको संक्रमणबाट म्याग्दीकी लक्ष्मी भट्टचनको मृत्यु भएको छ । उनी यूरोपेली मुलुक नेदरल्याण्डमा बस्दै आएकी थिइन् । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाकी ४० वर्षीय भट्टचन श्रीमान र २ बच्चासहित विगत १५ बर्षदेखि नेदरल्याण्डमा बस्दै आएको बताइएको छ । भट्टचन चिकित्सकको सल्लाह अनुसार विगत एक महिनादेखि होम क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकी थिइन् । […]